ကူညီပါ | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
TopSlotSite မှာကစားစတင်ရန် , အနောကျသို့လို3မှတ်ပုံတင်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့ခြေလှမ်းများ.
သငျသညျမှတ်ပုံတင်ထားကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, login နဲ့အမှန်တကယ်ငွေကစားရန်သိုက်. မှန်ကန်သော sequence ကို "အပ်ငွေ" ကနောက်တော်သို့လိုက်သည် "ငွေကိုင်" icon လေးဖြစ်ပါသည်. သငျသညျငွေပေးချေ၏သင်နှစ်သက်တဲ့ mode ကိုပေးသော်လည်းကိုယ်နိုင်. မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူအားလုံးအသေးစိတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အပ်ငွေကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သငျသညျငွေပေးချေမှုသင့်ရဲ့ mode ကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးပမာဏကိုသင့်ရဲ့လောင်းကစားရုံအကောင့်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်. ဘဏ်လုပ်ငန်းမူဝါဒများနှုန်းအဖြစ်, သင်ငွေသွင်းငွေထုတ်ကအသေးစိတ်အတွက်အီးမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
သင်တစ်ဦးနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည် 100% ကနဦးသိုက်၏ဆုကြေးငွေကိုသင်အကောင့်ကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးသိုက်လုပ်ကြသောအခါ.
ကြှနျုပျတို့၏ site မှာအမြတ်အစွန်းစေရန်နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆုကြေးငွေသတင်းအချက်အလက်များမှာကြည့်လိုက်ပါ.
သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတွင် Cashing TopSlotSite မှာရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည် .
"အ Withdrawal" option ကိုသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည် "ငွေကိုင်" icon လေးကို Select လုပ်ပါ. ဆုတ်ခွာ၏သင်နှစ်သက်တဲ့ mode ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပမာဏ Enter နှင့်ပုံစံအတွက်လိုအပ်သောအားလုံးအသေးစိတ်ကိုအတည်ပြု. ဒီအရောင်းအဝယ်အတွက်တစ်ဦးကမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြ၏ processing ကြာ3သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအကျဉ်းချုပ်တွင်ထင်ဟပ်ခံရဖို့လုပ်ဆောင်နေရက်ပတ်လုံး. သင်တို့၌အစဉ်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်သို့ပြန်လည်နေရာချသည်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်. မဖြစ်မနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှုန်းအဖြစ်, ပမာဏကိုသင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုသောအခါအီးမေးလျပို့.
ဆုတ်ခွာနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များများအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝဘ်စာမျက်နှာကိုရည်ညွှန်းနှင့်မူဝါဒများထုတ် Cashing ကျေးဇူးပြု..
သင့်အကောင့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိစ္စများရှိပါသည်လျှင်သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုပို့နိုင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲက Check contact us web page for more details.